यी हुन भाडा असुल गर्न नसक्ने सार्वजनिक निकायहरु, कुनको कति उठ्न बाँकी ? - Arthatantra.com
यी हुन भाडा असुल गर्न नसक्ने सार्वजनिक निकायहरु, कुनको कति उठ्न बाँकी ?
काठमाडौं । तीन सार्वजनिक निकायहरुले भाडा असुल गर्न सकेका छैन । भाडा असुल गर्न नसक्नेमा कर्मचारुी सञ्चय कोष, त्रिभुविन विश्वविद्यालयका मातहातका ३ क्याम्पस र समाज क्ल्याण परिषद रहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसानर कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं सुन्धारामा रहेको घर भाडाबाट १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्न देखिएको छ । यसबाट लिन बाँकी भाडा रकमको ब्याज तथा जरिवानासमेत असुल गुर्नपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै, त्रिवि मातहातका ३ क्याम्पसले जग्गा तथा भवनको विभिन्न भाडा ८५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । त्रिपुरेश्वस्थित जनप्रशासन क्याम्पस रहेको १० रोपनी १३ आना क्षेत्रफलको जग्गामा एक व्यापापर केन्द्र भवन निर्माण गरी व्यवसायीलाई ३२ वर्षका लागि लिजमा लिने व्यवसायीले २०६४ बैशाखदेखि २०७७ असारसम्म १ करोड ५२ लाख बुझाउन बाँकी देखिएको छ ।
लामो समयदेखि बाँकी रकम नबुझाएमा सम्झौता अनुसार कारबाही गरी असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान र भरपुर अस्पातल लगायतका ११ निकायले ४ करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्झौता अनुसार भाडा असुल गर्न सकेका छैन ।
समाज कल्याण परिषद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६२ मा परिषदले भवन जमिन र उपकरण भाडामा दिनुपर्दा सचिवले निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
भृकुटीमण्डप संचालन कार्यालयबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम २०७७ असार मसान्तसम्म १२ व्यक्ति, फर्म एवं संघसंस्थाहरुको नाफा ७ करोड १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।
यो वर्षको मात्र २ करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता बमोजिम असुली कारबाहीको प्रक्रियलार्य प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालय निर्देशन दिएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ४ शुक्रवार १८:३१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक मान्दैन राज्यको निर्देशन, भत्ता मात्रै सवा अर्ब वितरण
पछिल्लाे ऐन विपरीत १४७ स्थानीय तहले लिए साढे ७ करोड बढी भत्ता